Ingelosi kaMehiel Guardian: Uphawu lokuPhefumlelwa kunye nokuYila - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Ingelosi kaMehiel Guardian: Uphawu lokuPhefumlelwa kunye nokuYila
Uphawu lokuphefumlelwa, uMehiel ingelosi engumgcini inika umbono omkhulu wokuhlela. Ziintoni iimpawu zakhe? Ukhusela bani? Unokubhenelwa njani?
UMehiel yingelosi ekhuselayo yabo banophawu lwe-zodiac ngu-Aquarius kwaye bazalwa phakathi komhla wesi-5 nowesi-9 kuFebruwari. Iiproteni zakhe ziyazivakalisa kwizangqa zoyilo, ngakumbi kuyo yonke imisebenzi enxulumene nokubhala kunye nokuhlela. Ngombono wabo ophuphumayo, bahlala behlaziya kunye nokufumana izimvo ezintsha. UMehiel ubanceda baququzelele iingcinga zabo kwaye ubagcina kude nohanahaniso. Funda ngakumbi ngaye kwaye ufumane into ekufuneka uyenzile ukuze ubize le ngelosi yokuyila inamandla.
Ubuntu babo bazalwa phantsi komgcini wengelosi uMehiel
Ungaqhagamshelana njani naye
Ingelosi kaMgcini uMehiel yingelosi eyindoda. Igama lakhe lithetha UThixo ozisa ebomini zonke izinto. Ulawula enye yeengqeqesho zesayensi yamaxesha aphakathi; Igrama . Ingelosi engumgcini ifanekisela ukuphefumlelwa kunye nokukhuselwa. Ubonelela ngokulula kwendalo ngokubhala kwaye ugcina abo bazelwe phantsi kokhuseleko bakhe ekubeni babe ngabagxekayo kunye nokukopa. Ngobuchule bokuyila, funda ngakumbi ngoMehiel.
Fumanisa zonke iimpawu zokhuselo zengelosi zikaMehiel
Iimpawu zakhe ezintle kunye namandla:
Iinqununu, abaphathi bobuhle kunye nemvisiswano
URafael, umkhuseli wobudlelwane
Luhlaza kunye nePinki
I-Ambre, iCalcedony, iChrysolite, iAlexandrite, iJet, iCarnelian, iAmazonite kunye neObsidian
UMehiel, ingelosi engumgcini ka-Aquarius (ukusuka nge-5 ukuya kwi-9 kaFebruwari)
Abo bazalwa phantsi kukaMehiel bagqwesa ngaphakathi amacandelo ezobugcisa, njengakwimisebenzi ebandakanya ukubhala okanye ukwenza, kuba le ngelosi ilondolozayo ikhuthaza uqeqesho. Ngokuqhelekileyo baba odumileyo Enkosi kulwazi lwabo. Ukucinga kwabo kubenza bafumane ngokulula izinto ezintsha kunye izisombululo ezisebenzayo. Ngombulelo kuMehiel ukuba iingcinga zabo ziphathekayo kwaye zibe yinyani. Abo bazalelwe phantsi kwale mpembelelo ke bayathanda ukufunda kwaye banakho ukwenza imisebenzi enzima. Khumbula ukuba le ngelosi ingumlondolozi ikhusela kuzo zonke iintlobo ze inkcaso kwaye uhanahaniso . Abalandeli bakhe ke banamandla okucinga.
Kutheni unxibelelana noMehiel?
UMehiel yingelosi ka Ukulinganisa kunye nokuphakanyiswa, ungambiza ukuba uziva ngengqondo okanye ndidiniwe ngokwasemzimbeni. Enkosi kuye, ingqondo yakho iya kuvuselelwa kwakhona kwaye uyakufumana ukukhuthazeka kwakho. Ukubiza uMehiel kunokuba luncedo ukuba uyasilela uyilo . Uya kukuxhasa ekufumaneni isisombululo kwaye uya kukunceda ufumane ezona mvakalelo zakho zinzulu ukuze ufumane okona kulungileyo kuzo. Okokugqibela, le ngelosi inokukukhusela kwimiqobo, ngakumbi ukuba ivela kwiintshaba zakho, ukukunceda uphumelele.
yintoni intsingiselo ye-111
Ingelosi kaMgcini uMehiel ibonelela:
Isakhono esinengqondo esimangalisayo
Ukulinganisela phakathi kweemvakalelo neengcinga
scorpio kunye nothando lwe capricorn
Ungambiza njani uMehiel
Unokunxibelelana nengelosi yakho ekugcinayo ngeentsuku zabo kunye neeyure zokuphinda ubambe, eziyi-12th kaMatshi, ye-24 kaMeyi, ye-25 kaMeyi, ye-8 ka-Agasti, ye-20 ka-Okthobha neye-31 kaDisemba phakathi ko-21: 00 no-21: 20.
Ukunxibelelana nesithunywa sakho sokugcina, yitsho lo mthandazo ngesiqhumiso seMastic kunye nemure:
Ndiyathemba kuwe, Mnumzana, uncedo oluthile lokundivumela ukuba ndisebenzise izipho kunye namandla ondinike wona kakuhle, ukufundisa uluntu (ngamazwi nangezibhalo) malunga nenyaniso engapheliyo.
lithetha ntoni uphawu lwe-zodiac
Amandla endinokuwafumana ebomini angadibana nabo undinike bona kwaye, xa sidibene, sinako ukubanika ubomi bonke abo baleleyo.
Mehiel, andinayo enye ibhongo ngaphandle kokudlulisela kubantakwethu, ubuhle kunye nokusebenziseka kwendalo yakho yonke.
Ayingomsebenzi olula kwaye ndiza kuba nakho ukuwukhokela kakuhle, kuphela ukuba wena, Angel Mehiel, ndiboleke uncedo lwakho kunye nenkuthazo yakho.
Ingelosi ka-Eyael Guardian: UMkhuseli wabo bazelwe phakathi kwe-Febraury 20 - 24
Usetyenziso oluvela kwelona lincinci ukuPhumelela uphawu lweZodiac
zingaphi iindlela zobomi ezikhoyo
inombolo yam ye thamsanqa ngu 8 ithetha ukuthini
Iimpawu ezintsha ze-zodiac 2020
Iimpawu zomhlaza we-zodiac
zihambelana ne-aquarius kunye nomhlaza
indlela yobomi 8 kunye ne-6 yokuhambelana